व्यक्तिगत को व्यावसायिक आत्म-संकल्प खातामा यसको आफ्नै विशेषताहरु र सक्षमता, यो आवश्यकताहरु र सामाजिक-आर्थिक अवस्था लिइरहेको, भविष्यमा काम को स्कोप एक सचेत विकल्प छ। यो प्रक्रिया लामो जीवन span समेट्छ। सबैलाई निरन्तर आफ्नो भविष्य योजना र काम मा आफ्नो उपलब्धिहरू rethinking refleksiruet भन्ने तथ्यलाई।
व्यावसायिक आत्म-actualized र विभिन्न घटनाहरू सुरु। हामी माध्यमिक विद्यालय, उन्नत प्रशिक्षण को व्यावसायिक संस्थाहरू, को अन्त बारेमा कुरा गर्दै छन् निष्कासन , आदि यसबाहेक, व्यावसायिक आत्म-संकल्प कारण गर्न उमेर, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत, आत्म-actualization र आत्म-बोध लागि आफ्नो आवश्यकता को परिपक्वता।
हामीलाई थप विवरण विचार यसको विकास मुख्य चरणमा गरौं।
आफ्नो किशोरावस्था मा व्यावसायिक आत्म-संकल्प। केटा मा काम को विभिन्न प्रकार गर्न सम्बन्ध को नींव राख्नु सुरु, त्यहाँ एक विश्व-विकास र व्यक्तिगत मान रुचि को चयनात्मकता निर्धारण छ। यो मग मा स्कूल विषयहरू, रोजगारी को अंतर उपचार र एक शौक को उद्भव प्रतिबिम्बित गरिएको छ। फलस्वरूप, किशोरों को सपना र मनसाय अनुरूप गठन गर्दै हुनुहुन्छ।
आफ्नो युवावस्थामा, व्यावसायिक आत्म-संकल्प - सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य हो। किशोरावस्था मा भविष्य काम बारे विचार विस्तृत र अस्पष्ट छन्, र चयन अक्सर मनोवैज्ञानिक substantiated छैन भन्ने तथ्यलाई। आफ्नो युवा, र त्यसपछि जीवनमा सफलता र समृद्धि कसरी राम्रो आफ्नो चुनिएको पेशा निर्भर हुनेछ भन्ने समझ आउँछ। तसर्थ, जवान मान्छे माध्यमिक वा उच्च शिक्षा संस्थाले गर्न भर्ना लागि आवश्यक हुनेछ भनेर शैक्षिक विषयहरू थप ध्यान गर्छन।
युवा को व्यावसायिक आत्म-संकल्प माध्यमिक व्यावसायिक वा विश्वविद्यालय मा सिक्ने संग सम्बन्धित छ। फलस्वरूप, व्यक्ति थप मनोवैज्ञानिक formations हुन्छ। यसलाई - कामको गुणस्तर लागि समाजीकरण, विशेष अनुभव आवश्यक र महत्त्वपूर्ण। यो एक पेशेवर पहिचान प्राप्त गर्न एक परिणाम सक्षम हुनेछ।
कुनै पनि स्थिति को लागि लागू गर्दा तिनीहरूको काम मास्टर र सबै जिम्मेवारी प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ। फलस्वरूप, महत्त्वपूर्ण हुनेछ व्यावसायिक विकास। यो चरण हाल आत्म-निर्धारित पेशेवर छन् जवान मान्छे, को संख्या अचेतन उच्च योजना, काम-सम्बन्धित उपस्थिति कारण छ कि महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बेचैनी अनुभव देखि विकल्प, सही थियो कसरी "प्रमाणिकरण" को एक प्रकारको छ यो छ।
तसर्थ, परिपक्व व्यवसायीक को एक ठूलो संख्या सफलतापूर्वक "परीक्षण" काम जीवन एक प्रकारको पारित छैन। यो नयाँ, vitally महत्त्वपूर्ण कार्यहरू र लक्ष्य को उद्भव शुरू।
फलस्वरूप, एक व्यक्ति कि त चुनिएको एक विशेषज्ञ यसलाई आफूलाई स्थापित गर्न र बन्न वा अरू व्यावसायिक माइग्रेसन निर्णय प्रयास काममा रहन सक्छ, यो परिवर्तन को लागि आवश्यकता हो। तर कुनै पनि मामला, आत्म-रिलायन्स, गतिविधि, मा सामाजिक जिम्मेवारी र विशेष गुण।
व्यावसायिक आत्म-संकल्प एकदम राम्रो भयो कि घटना मा, अधिकांश पुरुषहरु र महिला पछि सफलता हासिल गर्ने अत्यधिक कुशल व्यवसायीक छन्।
तर यो मन मा सार्ने हुनुपर्छ एक व्यक्तिको उमेर अपेक्षा गरिने:
यसको शारीरिक र कमजोर मानसिक कार्य (सोचाइ, स्मृति, ध्यान);
कारण युवा व्यवसायीक को उद्भव गर्न ठाउँ बस्ने र साथीहरू र सहयोगिहरु को दूर पारित मा परिवर्तन;
व्यावसायिक प्रगति र क्यारियर लागि संभावनाहरु साँघुरो।
मान्छे मा संगीत को प्रभाव - शास्त्रीय र रक।
प्रभावकारी विधि र तरिकाहरू: कसरी भावना नहट्ने रोक्न
किन संचार मानिस? किन मान्छे प्रत्येक अन्य कुरा गर्छन्?
को ग्यारेज मा तल्ला। म ठोस वा काठ कसरी चयन गर्छन्? निर्माण प्रविधि
शैलीहरू मोडेल, रंग: महिलाहरु को लागि उत्सव पोशाक
टिभी श्रृंखला "Univer" मा आधुनिक विद्यार्थीहरूको तस्बिरहरू। नायक "Uni" र "नयाँ छात्रावास"
कसरी स्टाइलिश धनु (छवि) सिर्जना गर्न? 2016 मा फैशन रुझान